Sirdoonka SOMALIA oo laga helay xog xasaasi ah iyo xaaladda oo mareysa... - Caasimada Online
Home Warar Sirdoonka SOMALIA oo laga helay xog xasaasi ah iyo xaaladda oo mareysa…
Sirdoonka SOMALIA oo laga helay xog xasaasi ah iyo xaaladda oo mareysa…
Muqdisho (Caasimada Online) – Muddo dhowr bilood kadib, ayaa waxaa soo xoogeystay khilaaf hareereeyay Hogaanka sare ee Taliska Hay’adda Nabad Suggida ee Qaranka, iyadoo ay isa soo tarayaan wararka la xiriira khilaafaadka ka dhex tolan Saraakiisha sar sare ee Nabad Suggida.
Tani, ayaa ka dambeysay ka gadaal markii General Bashiir Maxamed Jaamac lagu eedeeyay in uu isku koobay Xafiiska Shaqada, iyadoo Xarunta Nabad Suggida aan lagu arag muuqa Ku Xigeenada Taliyaha Nabad Suggida.
General Bashiir Goobe, ayaan wax wada shaqayn ah kala dhaxayn Ku Xigeenadiisa, taa oo qayb ka noqotay fashilka xagga ammaanka ah ee ka jira Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.
Cabdalla Cabdalla Maxamed iyo C/salaan Yuusuf Guuleed oo ku dhow dhow Madaxweynaha Somaliya, ayaa waxaa jirta baaq uu labadaba u jeediyay, oo ah in ay samraan, oo ay dulqaataan intii muddo ah.
General Bashiir Goobe, ayaa xilliyada qaar la macaamila Maxamed C/laahi Xaamud, kaa oo leesla dhex maro in mararka qaar uu ka soo dhoweysto Cabdalla Cabdalla Maxamed & C/salaan Yuusuf Guuleed.
Ilo muhiim ah, ayaa sheegay in ay cirka isu shareertay wada shaqayn la’aanta ka dhaxeysa xubnaha ugu sareeya Taliska Hay’adda Nabad Suggida ee Qaranka, tiiyoo natiijadeeda laga dareemay Caasimada, oo lagu beegsanaayo Xubnihii Golaha Shacabka matalaayay.
Si kastaba ha-ahaatee khilaafaadka ka dhex aloosan Saraakiisha sar sare ee Nabad Suggida, ayaa la dhihi karaa waxay qayb ka tahay, tallaabada ay Xildhibaanada Baarlamaanka, Dowladda Xasan Sheekh ugu dhaliilayaan mid fashilmatay.